Diagenesis: ဝိသေသလက္ခဏာများ, လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 23/11/2021 10:17 | ဘူမိဗေဒ
ဘူမိဗေဒတွင် ကျောက်တုံးများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် ဖြစ်စဉ်အမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ အဲဒီထဲက တစ်ယောက်က diagenesis။ ဤအရာများသည် ကျောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးနောက် အစစ်ခံခြင်းမှအစပြုသည့် အချိန်ကာလအတွင်း အနည်ကျသည့်ဖြစ်စဉ်များဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စများတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အနည်ကျကျောက်များနှင့် အသွင်ပြောင်းကျောက်များ ဖွဲ့စည်းခြင်းအကြောင်း ပြောနေပါသည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် diagenesis၊ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် သိချင်စိတ်များအကြောင်း သင်သိလိုသမျှကို ပြောပြပါမည်။
1 Diagenesis ဆိုတာဘာလဲ
3 Diagenesis နှင့် cementation
Diagenesis သည် နည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့် အသုံးပြုသည့် ဝေါဟာရဖြစ်သည်- ပထမ ဆိုသည်မှာ အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းများကို အသစ် သို့မဟုတ် မတူညီသော အရာတစ်ခုအဖြစ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဒုတိယနှင့် ပို၍အသုံးများသော၊ အသုံးပြုမှုမှာ အနည်အနှစ်များ စတင်စုပုံပြီး ကျောက်ဖြစ်လာသည်အထိ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေချိန်အတွင်း သို့မဟုတ် ဖြတ်သန်းသွားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကို ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည် ဤကျောက်တုံးများ ယိုယွင်းပျက်စီးသည်အထိ ပြောင်းလဲနိုင်သော ဓာတုဗေဒနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း ရည်ညွှန်းသည်။ ဘူမိဗေဒတွင်၊ metamorphism သည် လွန်ကဲသောအပူချိန်နှင့် ဖိအားများပါ၀င်သည့် ဘူမိဗေဒဖြစ်စဉ်များမှတစ်ဆင့် ကျောက်တုံးများ၏ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။
ဘူမိဗေဒပညာရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းပုံပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အခြေခံ၍ ကျောက်များကို အမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားထားသည်။ အနည်ကျကျောက်များသည် အနည်အလွှာများကို ကျောက်ဆောင်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်၊ အချိန်နှင့် ဖိအားများစွာ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု။ မီးသင့်ကျောက်များသည် ချော်ရည် သို့မဟုတ် မဂ္ဂမာ၏ အအေးခံခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ Magma နှင့် lava သည် တူညီသောဒြပ်စင်အတွက် ဝေါဟာရနှစ်လုံးဖြစ်သော်လည်း magma သည် မြေမျက်နှာပြင်အောက်ရှိ ချော်ရည်များကို ရည်ညွှန်းပြီး ချော်ရည်သည် မျက်နှာပြင်အောက်ရှိ ချော်ရည်များကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ အသွင်ပြောင်းကျောက်များသည် ပြင်းထန်သောဖိအား၊ ထောင့်တွန်းအား သို့မဟုတ် အပူချိန်အောက်တွင် အသွင်ပြောင်းသည့် မီးသင့်ကျောက်များ သို့မဟုတ် အနည်ကျကျောက်များဖြစ်သော်လည်း ကျောက်ကို လုံးဝအရည်ပျော်ပြီး မက်ဂမာအလွှာထဲသို့ မစုပ်ယူနိုင်ပါ။
အနည်အနှစ်များကို ကျောက်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသောအခါ ကြုံတွေ့ရသည့် ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကို ကျောက်တုံးများ၏ လက္ခဏာရပ်များကို ထိခိုက်စေသည့် ဖြစ်စဉ်များကို diagenesis ဟူသော ဝေါဟာရအောက်တွင် ခွဲခြားထားသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်များသည် သဘာဝတွင် အဓိကအားဖြင့် ဓာတုဖြစ်စဉ်များဖြစ်ကြသော်လည်း ၎င်းတို့သည် delamination ကဲ့သို့သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ diagenesis တွင် အခြားသော ဘူမိဗေဒ လုပ်ငန်းစဉ် အမျိုးအစား တစ်ခုမှ ပါ၀င်သော ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်ခြင်း မပါဝင်ပါ။
Diagenesis လုပ်ငန်းစဉ်သည် အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး ဤအရွယ်အစားရှိ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင် စာရင်းပြုစုရန် အလွန်များသော်လည်း ၎င်းတို့သည် အမျိုးအစားများစွာသို့ ကျရောက်ပါသည်။ Diagenetic Process ၏ အရေးအကြီးဆုံး အမျိုးအစားများထဲမှ တစ်ခုမှာ ဇီဝဒြပ်စင်များ၏ အနည်များကို ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ရေနံစိမ်းနှင့် အခြားရုပ်ကြွင်းလောင်စာများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၏အစဖြစ်သည်။ Fossilization သည် မော်လီကျူးအဆင့်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် diagenesis ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ဆဲလ်တစ်ခုချင်း အထူးသဖြင့် အရိုးအတွင်းရှိ ဒြပ်ပေါင်းအချို့ကို calcite နှင့် အခြားသတ္တုဓာတ်များဖြင့် အစားထိုးလိုက်သောအခါ calcite နှင့် အခြားသတ္တုဓာတ်များသည် ရေတွင်ရော ရေတွင်ပါ ပျော်ဝင်သွားပါသည်။ အနည်အလွှာကို စစ်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်ထွန်းသည်။
Diagenesis နှင့် cementation
Cementation သည် diagenesis ၏ အရေးကြီးသော အဆင့်၊ ၎င်းသည် အနည်အမှုန်များ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပေါင်းစပ်သွားစေသည်။ ဤအရာသည် အနည်အနှစ်များအတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်သွားသောအခါတွင် ရေထဲမှပျော်ဝင်သောသတ္တုဓာတ်များ ( Calcite သို့မဟုတ် silica ) သည် ဓာတုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထပ်နေသော အနည်အလွှာများ၏ ဖိအားသည် compaction ဟုခေါ်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ diagenesis ဖြစ်စဉ်ကို ဦးတည်စေသည်။ သတ္တုဓာတ်ကြွယ်ဝသောရေကို စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့်အတူ ယင်းအမှုန်အမွှားများသည် ပျော်ဝင်နေသောသတ္တုဓာတ်များကို တွယ်ကပ်စေပါသည်။ အနည်အနှစ်များ ခြောက်သွေ့လာသည်နှင့်အမျှ သတ္တုဓာတ်များသည် မာကျောပြီး သဘာဝဘိလပ်မြေများ ဖြစ်လာသည်။ သဲကျောက်သည် ဤနည်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းလေ့ရှိသော ကျောက်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ သတ္တုဓာတ်ပျော်ဝင်သောရေများ စိမ့်ထွက်ခြင်းမှတစ်ဆင့် အနည်အလွှာများ၏ ဖွဲ့စည်းမှု ပြောင်းလဲခြင်း အပါအဝင် diagenesis ၏ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော အဆင့်များစွာကိုလည်း ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်၊ သတ္တုဓာတ်အသစ်များဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် အချို့သောသတ္တုဓာတ်များ သို့မဟုတ် ဒြပ်ပေါင်းများသည် အနည်အနှစ်များမှ ထွက်လာပြီး အခြားသတ္တုဓာတ်များ သို့မဟုတ် ဒြပ်ပေါင်းများဖြင့် အစားထိုးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပြုခြင်းဖြစ်စဉ်သည် diagenesis တွင်ဖြစ်ပေါ်ပြီး အနည်အနှစ်များသည် ကျောက်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် petrification ပြီးနောက်၊ diagenesis ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
ဆီးချိုရောဂါဖြစ်စဉ်များစွာသည် နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ သို့မဟုတ် သန်းပေါင်းများစွာကြာသည်။ ဘူမိဗေဒပညာရှင်၊ ပုဏ္ဏားဗေဒပညာရှင်များ၊ မနုဿဗေဒပညာရှင်နှင့် ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင်များသည် ၎င်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်လာသည့် diagenetic process ကို ခန့်မှန်းရန် ကျောက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြသည်။ ဤနည်းဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် အပေါ်ယံမြေလွှာ၏ tectonic ရွေ့လျားမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်၊ ကျောက်သားဖွဲ့စည်းပုံနှင့် မြေကြီးသမိုင်းအကြောင်း အခြားအချက်အလက်များ အပါအဝင် အတိတ်အကြောင်းများစွာကို လေ့လာသင်ယူခဲ့ကြသည်။
Diagenesis တွင် lithification ၊ လျော့ရဲသော အနည်အနှစ်များကို အစိုင်အခဲ အနည်ကျကျောက်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် ပါဝင်သည်။ အခြေခံ lithification လုပ်ငန်းစဉ်တွင် compaction နှင့် cementation ပါဝင်သည်။ အဖြစ်အများဆုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုမှာ compaction ဖြစ်သည်။. သတ္တုသိုက်များ တိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ ထပ်နေသောပစ္စည်းများ၏ အလေးချိန်သည် ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော အသိုက်များကို ဖိသိပ်စေသည်။ အနည်တွေ ပိုနက်လေလေ၊ ပိုတင်းကြပ်လာလေပါပဲ။
အမှုန်အမွှားများ ပိုမိုဖိသိပ်လာသည်နှင့်အမျှ pore space (အမှုန်များကြားရှိ နေရာလွတ်) သည် သိသိသာသာ လျော့နည်းလာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရွှံ့စေးကို အောက်ဘက်ကီလိုမီတာများစွာတွင် မြှုပ်နှံသောအခါ၊ ရွှံ့၏ထုထည်ကို ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချနိုင်သည်။ ချွေးပေါက်များ ကျုံ့သွားသည်နှင့်အမျှ အနည်ထဲတွင် ပါဝင်သော ရေအများစုသည် စွန့်ထုတ်သည်။
ဘိလပ်မြေသည် အနည်များကို အနည်ကျကျောက်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်အတွက် အရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အနည်အမှုန်များကြားတွင် သတ္တုဓာတ်များ ပုံဆောင်ခဲများ ပါဝင်ပါသည်။. မြေအောက်ရေသည် ဖြေရှင်းချက်တွင် အိုင်းယွန်းများကို သယ်ဆောင်သည်။ တဖြည်းဖြည်း၊ ဤအိုင်းယွန်းများသည် ချွေးပေါက်နေရာရှိ သတ္တုဓာတ်အသစ်များကို ပုံဆောင်ခဲစေပြီး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စုစည်းစေသည်။
ကျုံ့နေစဉ်အတွင်း ချွေးပေါက်နေရာ ပမာဏ လျော့နည်းသွားသကဲ့သို့၊ အနည်အနှစ်ထဲသို့ ဘိလပ်မြေထည့်ခြင်းသည်လည်း ၎င်း၏ ချွေးပေါက်များကို လျော့ပါးစေပါသည်။ Calcite၊ silica နှင့် iron oxide တို့သည် အသုံးအများဆုံး ဘိလပ်မြေများဖြစ်သည်။ ကော်ပစ္စည်းကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည် များသောအားဖြင့် ရိုးရှင်းသောကိစ္စဖြစ်သည်။ ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်ကို ပျော့သွားသောကြောင့် Calcite ဘိလပ်မြေမြှုပ်သည်။ ဆီလီကာသည် အပြင်းထန်ဆုံး ဘိလပ်မြေဖြစ်ပြီး ထို့ကြောင့် အပြင်းထန်ဆုံး အနည်ကျကျောက်ကို ထုတ်လုပ်သည်။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် သင်သည် diagenesis နှင့် ၎င်း၏လက္ခဏာများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ဘူမိဗေဒ » Diagenesis